ကိုယျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ဗီတာမငျ D နညျးနပွေီဆိုရငျ ဘယျလိုလက်ခဏာတှေ ပွနိုငျလဲ? | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကိုယျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ဗီတာမငျ D နညျးနပွေီဆိုရငျ ဘယျလိုလက်ခဏာတှေ ပွနိုငျလဲ?
1. စိတျကခြွငျး (သို့) စိုးရိမျပူပနျစိတျမြားခွငျး
ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့ခွငျးက စိတျကရြောဂါ၊ စိုးရိမျစိတျမြားခွငျးတို့နဲ့ ဆကျစပျမှုရှိပါတယျ။ ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့ခွငျး က ဦးနှောကျနဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာကနျြးမာရေးရဲ့ အခွားသောရှုထောငျ့တှကေိုလညျး ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ စိတျ ကတြာတှေ၊ ဆကျစပျတှေးချေါနိုငျစှမျးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ပွဿနာတှရေငျဆိုငျနရေတယျဆိုရငျ ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့သော လက်ခဏာဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့ခွငျးရဲ့ လူသိနညျးတဲ့ လက်ခဏာတဈခုကတော့ ခြှေးထှကျမြားခွငျးဖွဈပါတယျ။
မှေးကငျးစကလေးတှမှော ခြှေးအလှနျအကြှံထှကျခွငျးက ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့ခွငျးရဲ့ အဖွဈမြားတဲ့ အစောပိုငျး လက်ခဏာတဈရပျွဖျဈပါတယျ။ မိမိမှာ ပုံမှနျထကျ ခြှေးအလှနျအကြှံ ပိုထှကျနတေယျဆိုရငျ စဈဆေးကွညျ့ပါ။
3. အရိုးမြား ကိုကျခွငျး၊ အားနညျးခွငျး၊ ကြိုးလှယျခွငျး
အရိုးကနျြးမာရေးအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ အာဟာရဓာတျ ၂ မြိုးကတော့ ကယျဆီယမျနဲ့ ဗီတာမငျ D တို့ဖွဈ ကွပါတယျ။
အမွဲလိုလို အရိုးတှကေိုကျနတေယျ၊ အရိုးကြိုးတယျ ဆိုရငျ ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့လို့ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဂြာမနျ သုတေ သီတှကေ ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့ခွငျးက အရိုးကြိုးခွငျးအစပွုမှုနဲ့ ပွနျ့နှံ့မှုကို ၃၁% လောကျထိမွငျ့တကျစတေယျလို့ တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။
ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့ခွငျးကို ပွုပွငျခွငျးအားဖွငျ့ အရိုးကို နညျးလမျး ၂ မြိုးနဲ့အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ ပထမအခကျြကတော့ အရိုးတှပေိုပွီးသနျမာလာပါလိမျ့မယျ။ ဒုတိယအနနေဲ့ ကွှကျသားလုပျဆောငျခကျြတှကေို ပိုကောငျးစခွေငျးအားဖွငျ့ ဟနျခကျြညီစပွေီး ခြျောလဲခွငျးကလြော့ကစြကော နောကျထပျအရိုးကြိုးခွငျးတှေ မဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
4. အစာအိမျမှအကျဆဈမြား ပွနျကနျတကျခွငျး၊ ဗိုကျကယျခွငျးနှငျ့ အခွားအူပွဿနာမြား
အူထဲမှာရှိတဲ့ အကြိုးပွုဘကျတီးရီးယားပိုးတှနေဲ့ ဗီတာမငျ D ရဲ့ဆကျစပျမှုကို အတိအကြ သကျသမေပွနိုငျ ပမေယျ့လညျး ဗီတာမငျ D က ကနျြးမာတဲ့အူကို ထိနျးသိမျးရာမှာ အရေးပါတယျဆိုတာကတော့ အသအေခြာ ပါပဲ။
ဗီတာမငျ D က အစာအိမျနဲ့ အူလမျးကွောငျးတဈခုလုံးနဲ့ ဆိုငျပါတယျ။ အူထဲက အကြိုးပွုဘကျတီးရီးယားပိုး တှေ ဆုံးရှုံးခွငျးကွောငျ့ အကျဆဈမြားပွနျကနျတကျခွငျး၊ အစာခမြှေုအားနညျးခွငျး၊ ဗိုကျကယျခွငျး၊ ဝမျးခြုပျခွငျး တှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဒီပိုးတှအေသကျရှငျဖို့အတှကျ ဗီတာမငျ D လိုအပျတာဖွဈနိုငျပါတယျ။
5. အိပျပြျောဖို့ ခကျခဲခွငျး
ပွညျ့စုံတဲ့ညအိပျရာဝငျ အထောကျအပံ့တှဖွေဈတဲ့ အိပျပြျောစဖေို့အတှကျ အိပျခနျးကို အပငျမြားထားခွငျး၊ အိပျ စကျခွငျးကို အားပေးတဲ့သဘာဝနညျးလမျးတှသေုံးသျောလညျး အိပျမပြျောဘူးဆိုရငျ နဘေ့ကျမှာ နရေောငျခွညျ ကနပွေီး ဗီတာမငျ D လုံလောကျစှာမရလို့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့ခွငျးက အိပျစကျမှုပုံစံတှကေို အနှောငျ့အယှကျဖွဈစပွေီး အိပျမပြျောခွငျး၊ အိပျနရောမှနိုး လာခွငျး၊ နှဈခွိုကျစှာအိပျမပြျောခွငျး၊ ရုတျတရကျအကွောငျးမရှိ နိုးလာခွငျးနဲ့ အိပျနစေဉျမှာ မသငျ့တျောတဲ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုတှဖွေဈခွငျးစတဲ့ အိပျစကျခွငျးဆိုငျရာပွဿနာတှကေိုဖွဈစပေါတယျ။
6. လိငျတံ မထောငျမတျနိုငျခွငျး
လိငျတံ မထောငျမတျနိုငျခွငျးက အမြိုးသားတှမှော အဖွဈမြားတဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ပွဿနာတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါ က တခွားပွသနာတှကွေောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပမေယျ့ ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့ခွငျးကိုလညျး မထေ့ားလို့မရပါဘူး။
သိုငျးရှိုကျလုပျဆောငျခကျြနညျးရငျလညျး ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့စနေိုငျပါတယျ။
8. ရောဂါပိုး မကွာခဏဝငျခွငျး
ဗီတာမငျ D က ကိုယျခံအားစနဈကောငျးမှနျစှာ လညျပတျနိုငျဖို့အတှကျ မရှိမဖွဈအရေးကွီးတဲ့အတှကျ ရောဂါပိုး မကွာခဏဝငျခွငျးက ကိုယျခံအားစနဈ အားနညျးခွငျးကွောငျ့ဖွဈပွီး ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့တဲ့လက်ခဏာဆိုတာ အံ့ အားသငျ့စရာမရှိပါဘူး။
ဂပြနျက ကြောငျးနအေရှယျကလေးတှကေိုလလေ့ာမှုတဈခုအရ ဗီတာမငျ D ဆေးပွား နစေ့ဉျသောကျတဲ့သူတှေ က ရာသီတုပျကှေးရောဂါကို ကာကှယျနိုငျတယျလို့တှရေ့ပါတယျ။
ဗီတာမငျ D က ကိုယျခံအားကို ၅ ဆတကျစပွေီး ရောဂါပိုးတှနေဲ့ ဗိုငျးရပျဈတှကေိုတိုကျထုတျနိုငျစှမျးကို မွငျ့မား စပေါတယျ။
လလေ့ာမှုတှအေရ ဗီတာမငျ D နညျးပါးခွငျးက သှေးအားနညျးရောဂါဖွဈနိုငျခြေ ပိုမြားစသေလို သှေးအားနညျး ရောဂါရှိသူတှမှော ဗီတာမငျ D ပမာဏနညျးပါးတာကို တှရှေိ့ရပါတယျ။
1. စိတ်ကျခြင်း (သို့) စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်များခြင်း
ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ခြင်းက စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်စိတ်များခြင်းတို့နဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ခြင်း က ဦးနှောက်နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရဲ့ အခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ် ကျတာတွေ၊ ဆက်စပ်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုရင် ဗီတာမင် D ချို့တဲ့သော လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ လူသိနည်းတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ ချွေးထွက်များခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ ချွေးအလွန်အကျွံထွက်ခြင်းက ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ အဖြစ်များတဲ့ အစောပိုင်း လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖ်ြစ်ပါတယ်။ မိမိမှာ ပုံမှန်ထက် ချွေးအလွန်အကျွံ ပိုထွက်နေတယ်ဆိုရင် စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
3. အရိုးများ ကိုက်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ကျိုးလွယ်ခြင်း
အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ် ၂ မျိုးကတော့ ကယ်ဆီယမ်နဲ့ ဗီတာမင် D တို့ဖြစ် ကြပါတယ်။
အမြဲလိုလို အရိုးတွေကိုက်နေတယ်၊ အရိုးကျိုးတယ် ဆိုရင် ဗီတာမင် D ချို့တဲ့လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဂျာမန် သုတေ သီတွေက ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ခြင်းက အရိုးကျိုးခြင်းအစပြုမှုနဲ့ ပြန့်နှံ့မှုကို ၃၁% လောက်ထိမြင့်တက်စေတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ခြင်းကို ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့် အရိုးကို နည်းလမ်း ၂ မျိုးနဲ့အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ပထမအချက်ကတော့ အရိုးတွေပိုပြီးသန်မာလာပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ ကြွက်သားလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပိုကောင်းစေခြင်းအားဖြင့် ဟန်ချက်ညီစေပြီး ချော်လဲခြင်းကလျော့ကျစေကာ နောက်ထပ်အရိုးကျိုးခြင်းတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
4. အစာအိမ်မှအက်ဆစ်များ ပြန်ကန်တက်ခြင်း၊ ဗိုက်ကယ်ခြင်းနှင့် အခြားအူပြဿနာများ
အူထဲမှာရှိတဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားပိုးတွေနဲ့ ဗီတာမင် D ရဲ့ဆက်စပ်မှုကို အတိအကျ သက်သေမပြနိုင် ပေမယ့်လည်း ဗီတာမင် D က ကျန်းမာတဲ့အူကို ထိန်းသိမ်းရာမှာ အရေးပါတယ်ဆိုတာကတော့ အသေအချာ ပါပဲ။
ဗီတာမင် D က အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ အူထဲက အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားပိုး တွေ ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် အက်ဆစ်များပြန်ကန်တက်ခြင်း၊ အစာချေမှုအားနည်းခြင်း၊ ဗိုက်ကယ်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း တွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီပိုးတွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက် ဗီတာမင် D လိုအပ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
5. အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲခြင်း
ပြည့်စုံတဲ့ညအိပ်ရာဝင် အထောက်အပံ့တွေဖြစ်တဲ့ အိပ်ပျော်စေဖို့အတွက် အိပ်ခန်းကို အပင်များထားခြင်း၊ အိပ် စက်ခြင်းကို အားပေးတဲ့သဘာဝနည်းလမ်းတွေသုံးသော်လည်း အိပ်မပျော်ဘူးဆိုရင် နေ့ဘက်မှာ နေရောင်ခြည် ကနေပြီး ဗီတာမင် D လုံလောက်စွာမရလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ခြင်းက အိပ်စက်မှုပုံစံတွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အိပ်နေရာမှနိုး လာခြင်း၊ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်မပျော်ခြင်း၊ ရုတ်တရက်အကြောင်းမရှိ နိုးလာခြင်းနဲ့ အိပ်နေစဉ်မှာ မသင့်တော်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ခြင်းစတဲ့ အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။
6. လိင်တံ မထောင်မတ်နိုင်ခြင်း
လိင်တံ မထောင်မတ်နိုင်ခြင်းက အမျိုးသားတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ က တခြားပြသနာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ခြင်းကိုလည်း မေ့ထားလို့မရပါဘူး။
သိုင်းရွိုက်လုပ်ဆောင်ချက်နည်းရင်လည်း ဗီတာမင် D ချို့တဲ့စေနိုင်ပါတယ်။
8. ရောဂါပိုး မကြာခဏဝင်ခြင်း
ဗီတာမင် D က ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အတွက် ရောဂါပိုး မကြာခဏဝင်ခြင်းက ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဗီတာမင် D ချို့တဲ့တဲ့လက္ခဏာဆိုတာ အံ့ အားသင့်စရာမရှိပါဘူး။
ဂျပန်က ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေကိုလေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဗီတာမင် D ဆေးပြား နေ့စဉ်သောက်တဲ့သူတွေ က ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။
ဗီတာမင် D က ကိုယ်ခံအားကို ၅ ဆတက်စေပြီး ရောဂါပိုးတွေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်စွမ်းကို မြင့်မား စေပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ ဗီတာမင် D နည်းပါးခြင်းက သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများစေသလို သွေးအားနည်း ရောဂါရှိသူတွေမှာ ဗီတာမင် D ပမာဏနည်းပါးတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။